ahdi Ali Weydow
” Dul milow deb kuu shidow ku gubtaa” waa
sheeko xiisa badan oo isasa suran.
Demiye iyo Deb shide waxay ahaayeen laba
nin oo meel ku wada nool, deb shide wuxuu
ahaa far soo dheeraatay, dabeecad xumo
ayuu ku caan baxay. Qof kii wax yar ay dhex
maraan, wuu ku can dhuufi jiray. Deriska
ayuu habeenki qora deb leh ku tuuri jiray.
Daadadka iyo dhiiqada ayuu cidaha u leexin
jiray, marki xili roobaad la joogo!
Demiye inkastuu qalbiga ka in kiri jiray fal fal
Previous sheeko xikmad badani ku dheehan tahay qoraaga Cali mahdi jilacow……….
Next Qoraaga CMJ iyo Xikmada maanta Dul milow deb kuu shidow ku gubtaa” waa sheeko xiisa badan oo isasa suran………………….